Sina F800-9 * 60w andry sy bara fanasan-dàlana mihetsika amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso pixel fanamboarana sy orinasa | Mihoatra
F800-9 * 60w andry sy fanasan-damba mihetsika amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso pixel
9 * 60w andry ary manasa jiro mihetsika amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso pixel dia karazana jiro matihanina karazana vaovao sy jiro fisotroana izay afaka mihetsika, miorina amin'ny famirapiratana avo sy ny optika teknolojia vaovao. Izy io dia manana fahaiza-manao saritany piksela ary havaozina miaraka amin'ny haitao misy jiro boribory, afaka manarona effets fanasan-jiro mameno. Vokatry ny lobolobo misy zoro tery 3.5 °, zoro 40 ° ny sakany, mamorona vokan'ny lamba fisasana. Ny mode mitongilana miaraka amin'ny 270 °, ny lohan'ny andry dia afaka mihetsiketsika miankavia na miankavanana ao anatin'ny elanelam-potoana 35 °, manao an'io hazavana io dia misy fiatraikany lehibe kokoa eo amin'ny sehatra. Tsy maninona ny asa amin'ny jiro WASH matihanina, ampiasaina amin'ny endrika sehatra, na miasa toy ny jiro vokany, dia afaka mandeha tsara amin'ny rehetra.
9 * 60w andry ary manasa jiro mihetsika amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso pixel
Ity dia fanandramana vaovao hamoronana vokatra misy heriny lehibe ho jiro tariby izay mety hihodina mihodina. Tsy vitan'ny hoe mitantana tsara ny fanaparitahana ny hafanana izy io, fa mitantana tsara ny fandanjana ny lanjan'ny lohan'ny loha. Tady mahery tokoa na dia maivana amin'ny tarika rehetra aza, ary ny vokan'ny fanasana dia lavorary. Ity maodely ity dia nanavao ny olana fa tsy afaka mamorona jiro boribory ny masom-bolo hexagon, ka na eo amin'ny sehatry ny matihanina aza dia azo iasaina tsara toy ny jiro fanasana matihanina.
Mihodina miaraka amina dingana 3 mihetsika dingana moto dia 270 °, marina toerana ary mihetsika milamina. Ny lohan'ny andry dia afaka mihazakazaka mandroso miankavia na miankavanana ao anatin'ny 35 °. Loko sy lamina marobe fiasan'ny Marco, preset 46 karazana loko Marco ary preset 38 karazana lamina asan'ny Marco. Dimotra feno ny fonosana optique, mihena ny haavon'ny 65536. Ny matau famolahana dia misy fitaovana, mora apetraka.
Loharano maivana 9 * 60W RGBW 4in1 Led Asehoy: fisehoana loko TFT 1,8 santimetatra izay ahodina 180 °
Zoro zom 3,5 ° - 40 ° Data in / Out socket: kitapo XLR 3-pin
Fanjifana herinaratra 650W Naoty fiarovana: IP20
fanaraha-maso Pan / Tilt
Fomba fanaraha-maso DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Music / RDM Mitongilana 270 °, fahamendrehana 0,86 ° / dingana, fahamendrehana manara-penitra: 0,0034 °
Mode DMX 20/25/61 CH Mampiasa rafitra famerenana kaody matevina
Maody maoderina 4 misy tara na tsy misy tara, maimaimpoana Flicker Refy: 996 × 150 × 291mm
Akanjo mitazona haingana 1 ~ 25Hz Milanja: 19 kilao
Fanaraha-maso pixel LED Fonosana mahazatra: baoritra; Tranga sidina amin'ny safidy
Sasao maimaimpoana ny voka-bolo Fanamarinana
Mihetsika ny lohan'ny andry miaraka amin'ny 35 ° eo ankavia miankavanana CE & RoHS
F: Ahoana ny amin'ny fepetra fonosana amin'ny vokatrao?
Re: fonosana mahazatra dia baoritra fanondranana (ampiasao EPE fonosina tsara ny jiro) ary baoritra baoritra 5 sosona
F: Inona ny fe-potoana fitaterana misy?
Re: Ny kaomandy kely matetika dia alefan'ny Express (DHL, UPS, FedEx, TNT, sns), amin'ny alàlan'ny rivotra, amin'ny ranomasina na amin'ny lalamby.
Homena anao ny vahaolana tsara indrindra arakaraka ny baikonao sy ny maha maika ny fandraisana ny entana.
Re: miankina amin'ny habetsahan'ny lamina, ny maodely mivarotra mafana indrindra tazominay ao anaty tahiry, ka raha manafatra ireo vokatra mahazatra tsy dia be dia be izahay, mazàna dia manana tahiry izahay ary ny fotoana fandefasana dia ao anatin'ny 3 andro aorian'ny fahatongavan'ny fandoavam-bola.
Fanaterana ny entan'ny orinasa
Teo aloha: Z68-fizarana fizaran-jiro ivelany zoom par par piksela jiro
Manaraka: M52-hazavana farany hazavana mahery vaika 24 * 60W taratra hazavana mihetsiketsika eo amin'ny loha tantely